Misy karazana 300 mahery Sargassum ahidrano, ref vondrona misy ahidrano volontsôkôlà an-dranomasina. Misy karazany roa anefa amin'ny ankapobeny Sargassum (mitsingevana sy tsy mitsinkafona) izay miovaova ny fiantraikany amin'ny vatohara sy ny paikady fitantanana ilaina amin'ny fiatrehana izany.
Tsy mitsinkafona Sargassum Ny karazana dia loza mitatao ho an'ny ekôsistemin'ny haran-dranomasina rehefa mihabetsaka eny amin'ny haran-dranomasina simba, manakana ny fipetrahana sy ny fitomboan'ny haran-dranomasina ary mampihena ny fahafahan'ny haran-dranomasina hiverina indray aorian'ny korontana. ref
Akatona ny Sargassum tady macro-algae nofo. Sary © Jeff Yonover
Ny paikady fitantanana dia ahitana ny fanesorana mavitrika ny Sargassum algôna na amin'ny tanana na amin'ny fampiasana fitaovana fisintomana. Na izany aza, ny fahombiazany sy ny vokatra maharitra amin'ireo fomba ireo dia tsy fantatra. ref Ny soso-kevitra amin'izao fotoana izao dia ahitana: ref
Fanesorana fampifangaroana miaraka amin'ny fiarovana mahomby sy mety hampidirana indray ny herbivores
Esory ny fihazonana (fotony) ny Sargassum ahidrano
Mitantana ny fanesorana amin'ny vanim-potoana voalohan'ny fitomboan'ny Sargassum
Ny fampidirana ny vokatry ny fizaran-taona sy ny fiovan'ny toetr'andro ao amin'ny Sargassum drafitra fanesorana
mitsinkafona Sargassum karazana tsihy matevina eny ambonin'ny rano. Na dia hita any amin'ny rano misokatra amin'ny Atlantika Avaratra aza izy ireo, dia misy fiatraikany ara-tontolo iainana sy ara-toe-karena izy ireo rehefa mitsingevana sy manindrona ny faritra haran-dranomasina marivo.
Ankoatra ny fiantraikany ara-tontolo iainana, mety hanimba ny indostrian'ny fizahan-tany ny habetsahan'ny Sargassum eny amoron-dranomasina. Sary © Jennifer Adler
Ny paikady fitantanana dia ahitana: ref
Fanadiovana tora-pasika na amin'ny tanana na amin'ny milina
Ny harato sakana hanangonana ny ahidrano eny amoron-dranomasina sy hisorohana ny algà tsy hanangona eny amoron-dranomasina
Fanesorana ny Sargassum amin'ny traktera any Karaiba. Sary © The Nature Conservancy
Ny indostrian'ny indostria dia mety ho afaka manao varotra voaangona Sargassum satria azo ampiasaina ho zezika, fanafody, famokarana bioplastic, ary na dia amin'ny sakafo aingam-panahy any Azia aza. ref
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAlliance Karaiba ho an'ny fizahantany maharitra-Sargassum: Toro-làlana ho an'ny Karaibamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanarenana ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fanesorana ny macroalgae: Toetran'ny fahalalana sy ny fiheverana ny fitantanana sy ny fampiharana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDutch Caribbean Nature Alliance: Fisorohana sy fanadiovana ny Sargassum any Karaiba holandeymanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoUNEP webinar momba ny siansa Sargassum